नेपाल आइस हेमजा गोल्डकपमा खुमलटारको बिजयी • Nepal's Trusted Digital Newspaperनेपाल आइस हेमजा गोल्डकपमा खुमलटारको बिजयी • Nepal's Trusted Digital Newspaper
नेपाल आइस हेमजा गोल्डकपमा खुमलटारको बिजयी
गोविन्द तिमिल्सिना, हेमजा । छैटौं नेपाल आइस अन्तर्राष्ट्रिय हेमजा गोल्डकप आमन्त्रित नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको तेस्रो क्वाटर पाइनलमा खुमलटार युवा क्लब विजयी भएको छ ।
पोखरा २५ हेमजा स्थित गौरीशंकर खेलमैदानमा भएको खेलमा खुमलटार युवा क्लबले बागमती युवा क्लबलाई २–० ले हराउँदै विजयी भएको हो । खुमलटार युवा क्लबको तर्फबाट खेलको २ मिनेटमा जर्सि न. १६ का आशिष श्रेष्ठले गोल गर्नुभएकाे थियाे ।
त्यस्तै खेलको २८ मिनेटमा जर्सि न. १७ का आशिष सुनामले गोल गर्नुभएकाे थियाे । खेलमा २८ औँ मिनेटमा गोल गर्नुभएका आशिष सुनाम म्यान अफ दि म्याच समेत चुनिनुभयाे । उहाँले पुरस्कार वापत नगद ५ हजार हात पार्नुभएकाे छ । यो जितसँगै खुमलटार युवा क्लब प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रतियोगिता अन्तरगत असार (मङ्गलबार) ७ गतेको खेल फुटबल क्लब डाउला र विभागीय टोली सशत्र प्रहरी बलको एपिएफबीच हुने आयोजकले जानकारी दियो । हेमजा युनाइटेडको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ६ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले ३ लाख प्राप्त गर्नेछ ।